Hlola iTaipei, eTaiwan - World Tourism Portal
Hlola iTaipei, eTaiwan
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eTaipei, eTaiwan.
Ongakwenza eTaipei, eTaiwan
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeTaipei
Bukela ividiyo ekhuluma ngeTaipei
Hlola iTaipei inhlokodolobha yezwe lonke Taiwan. Kusengxenyeni esenyakatho yalesi siqhingi kubheseni phakathi kwezintaba zaseYangming nezintaba eziphakathi nendawo. Kuyinto, enabahlali abayizigidi ezingama-2.6, indawo yesine yokulawula enkulu kunazo zonke eTaiwan, ngemuva kweNew Taipei, Kaohsiung neTaichung. Kodwa-ke, indawo yedolobha elikhulu iGreater Taipei, elihlanganisa iCity Taipei City kanye neNew Taipei City neKeelung, limele iqembu elikhulu laseTaiwan elinabantu abacishe babe yizigidi ezingama-7. UTaipei usebenza njengesikhungo sezimali, amasiko kanye nohulumeni kulesi siqhingi.
E-1884, umbusi wamakhosi waseQing eTaiwan, uLiu Mingchuan, wanquma ukuhambisa inhloko-dolobha eTaipei, kwathi ngokwakhiwa kwamahhovisi kahulumeni kanye nokugcwala kwabasebenzi bakahulumeni, izinsuku zikaTaipei njengedolobha lemakethe elilele. UTaipei uhlale inhlokodolobha yesifundazwe lapho iTaiwan inikezwe isikhundla sesifundazwe e1885. Njengoba iTaipei isenyakatho neTaiwan (indawo esondele kakhulu kuyo Japan), idolobha laqhubeka ukuchuma lapho iTaiwan inikelwa eJapan e1895. Kodwa-ke, njengoba iJapan yayisenkingeni yesikhathi 'sesimanjemanje-esizayo-isikhathi', ukubhekelwa okuncane kwanikezwa esakhiweni sendabuko saseChina sikaTaipei futhi izakhiwo eziningi ezindala, kufaka phakathi nodonga lwedolobha, zadilizwa. Ngakolunye uhlangothi, kwakhiwa izakhiwo eziningana zaseYurophu ezakhiwe ababusi baseJapan - iSigungu SikaMongameli neNational Taiwan University ngokuba phakathi kwezidumile. Ubuhle bokwakhiwa kwaleli dolobha, babuye babhekana nolaka olukhulu lapho uhulumeni we-KMT efika evela ezweni laseChina e1945.
Ukubhekana nokuqothuka kwezigidi zababaleki abavela ezweni lonke, kwavela izindawo zokuhlala zesikhashana kulo lonke idolobha. Kamuva, lezi zathathelwa indawo yizakhiwo zamafulethi kakhonkolo zaseSoviet-noma ('-n-style'). Lezi zakhiwo zibonisa isimo sikaTaipei kuze kube muva nje.
Kuma-1980s, umnotho waseTaiwan waqala ukushuba. Amanani anda futhi ukuze kwaneliswe imakethe ecebile nenobungcweti, iTaipei yaqala ukuguquka. Kwabekwa izindlwana ezibanzi, ezakhiwe ngotshani bezihlahla, kwasungulwa amabhlokhi asezingeni eliphakeme kwasungulwa izindawo zokudlela ezinhle nezindawo zokudlela ezinhle zamakhekhe. Idolobha lalikhula kakhulu futhi alikaze libheke emuva kusukela ngaleso sikhathi.
ITaipei yanamuhla iyidolobha elinokuzethemba lezakhamuzi eziyizigidi ezingama-2.5 (cishe izigidi eziyisikhombisa kubandakanya nezindawo ezingaphansi), futhi libonakala ngabantu bayo abanobungane nemigwaqo ephephile. Yize lingajwayelekile phezulu kuhlu lwezindawo ezivakashelwa abavakashi, liyindawo ethokozisayo yokuvakashela futhi baphile. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kosayizi wayo, iTaipei ayinazo izindawo ezinzima ezibhekwa njengezingaphephile, ngisho nasebusuku - okuyinto ngokwayo ekhangayo.
Indawo yedolobha ihlukaniswe ngamasiko i-East and West. Uhlangothi lwaseNtshonalanga, olunemigwaqo yalo emincane nabathengisi basemaceleni omgwaqo, lubhekwa njengendawo enhle yempilo yakudala yamaTaipei, kanti i-East Taipei, inezindawo zayo ezinkulu ezitolo, izindawo zokudlela zama-chic, nezindawo zokudlela ezinhle namakhekhe, okusikhumbuza labo abatholakala Tokyo, Paris or I-New York imele i-metamorphosis yedolobha ibe idolobha lanamuhla nelamazwe omhlaba.
ITaipei inomswakama oshubisa umnkantsha othonywe kakhulu yinkabazwe yempumalanga ye-Asia. Ubusika abumanzi kepha bufudumele ngokuphelele ngokushisa okuphakathi kwe-20 ° C (68 ° F) ne-13-14 ° C (56-57 ° F).
ITaipei idolobha labantu abavela kwimvelaphi eminingi ehlukahlukene, futhi ungathola ukuxubana okuhle kwamaShayina (abantu abemindeni yabo abafudukela eTaiwan besuka ku1949 kuya phambili) nabomdabu baseTaiwan (abantu imindeni yabo eyayikade Taiwan kusukela i-Ming noma i-Qing Dynasties). Ngenkathi iMandarin ilulimi lwe-lingua, futhi ikhulunywa futhi iqondwa ngabantu abaningi abaneminyaka engaphansi kwe-60, ezinye “izilimi” zesiShayina zivame ukuzwakala. Phakathi kwabomdabu baseTaiwan, kuyilapho izikhulumi zaseMinnan zakha iningi, kukhona futhi inani elikhulu labomdabu abakhuluma isiHakka bomdabu baseTaiwan abahlala eTaipei.
IsiNgisi siyimpoqo kuzo zonke izikole zaseTaiwan, futhi abantu abaningi abaneminyaka engaphansi kwe-40 bazoba okungenani nesiNgisi, yize bembalwa abashelelayo. Noma kunjalo, akusho ukuthi ukufunda isiMandarin kanye / noma iMinnan kuzokwenza uhambo lwakho lubelula.
Yini ongayithenga eTaipei
ITaipei kungenzeka inesinye sezindawo zokudlela eziphakeme kakhulu emhlabeni. Cishe yonke imigwaqo ne-alley inikeza uhlobo oluthile lwe-eatery. Vele, ukudla kwaseChinese (okuvela kuzo zonke izifundazwe) kumelwe kahle. Ngaphezu kwalokho, ukudla kwase-Thai, Vietnamese, Japan, Korea nase-Italy kuyathandwa. Ngokuyisisekelo, i-East Taipei, ikakhulukazi ezungeze i-Dunhua ne-Anhe Roads, kanye ne-expatla ye-Tianmu kulapho kungqubuzana khona izingcweti nabacebile nabadumile, kanti iWest Taipei inikezela ngezindawo zokudlela ezincane.
Ngenxa yenani elikhulu lendawo yokudlela, cishe akunakwenzeka ukwenza uhlu oluphelele, kepha ngezansi kunezindawo zokudlela ezimbalwa ezinconyelwe ukunambitheka kochwepheshe.
Izimakethe zasebusuku eziningana zitholakala esifundeni ngasinye. Ezinye zivulekile phakathi nesikhathi sasemini, futhi zonke zivulekile kuze kube phakathi kwamabili. Izimakethe zasebusuku ziqukethe izindawo zokudlela nezitolo ezindaweni ezingapheli namadokodo amancane phakathi nendawo. Yonke imakethe yasebusuku inezinhlobonhlobo zokudla, ngakho-ke noma imiphi imakethe yasebusuku oyitholayo ukubheja okuhle kokudla okuhle. Ngenxa yokukhethwa okukhulu, isincomo ukuthi uhambe nabantu abambalwa bese wabelana ngokudla. Ukudla okuthengiswa ngokujwayelekile kuphephile ukudla, kodwa sebenzisa ukuqonda okujwayelekile noma ngabe unesisu esizwelayo!
Okudume kakhulu eTaipei yiSilin Night Market. Iyatholakala kalula nge-MRT (umugqa obomvu) eziteshini zaseJiantan noma zeShilin. Inesigaba esikhulu somdlalo, nezitolo eziningi zokudla. Eduze kukhona abathengisi, futhi ukuthokozisa kufanelekile lapha kubathengisi abangadli ngokudla, ikakhulukazi izingubo. Futhi, bangakunyusela amanani uma ungabheki iTaiwan. Lokhu kwaziwa njengemakethe yasebusuku “evakashele kakhulu,” futhi abanikazi bezitolo ngokuvamile bayakwazi ukukhuluma isiNgisi.
Abendawo eTaipei babheka iShinin njengezivakashi, nokudla okunambitha ukunambitheka kwezivakashi zasendaweni enkulu. Enye inketho enhle yi-Ning Xia Yeshi.
IGongguan Yeshi isendaweni engasentshonalanga yoMgwaqo iRoosevelt ngaphesheya komgwaqo usuka eNational Taiwan University (Taida). Lapho uphuma esiteshini se-Gongguan (umugqa oluhlaza), sebenzisa ukuphuma kwe- #1 bese ulandela umgwaqo oseceleni uze ubone kumi umgwaqo oseceleni komgwaqo. Le makethe yasebusuku ivaliwe ngoLwesithathu ebusuku. Kuyaziwa ngezinhlobonhlobo zokudla kwawo, futhi iningi labanikazi bezitolo abazi isiNgisi ngenxa yeningi labafundi bamazwe omhlaba e-NTU.
ILongshan Yeshi iyingxenye yasendulo yeTaipei etholakala eLongshan Station kulayini ohlaza okwesibhakabhaka weMRT. Kuyikhaya “i-Snake Alley” nethempeli elidumile leLongshan, okungenye yamathempeli amakhulu e-Asia. “Isifunda esibomvu” saseTaiwan sitholakala eduzane, futhi inqwaba yabantu abangenacala abangenacala kuleli dolobha lapha ngenxa yeminikelo yokudla yamahhala ethempelini. Kodwa-ke, ubugebengu buphansi kakhulu ngakho-ke akufanele ukhathazeke!
URahehe Yeshi ungenye yezimakethe zasebusuku “zaseTaiwan” phakathi kwe-KM embalwa yedolobha. Ungumgwaqo owodwa omude, futhi waziwa ngokudla kwawo kwasendaweni namasokisi ashibhile.
ITamsui (Danshui) Yeshi isendaweni ekude kakhulu kwi-MRT, esiteshini saseTamsui ekugcineni komngcele obomvu. Iyaziwa ngokubuka kwayo okuhle eceleni komfula, izinhlamvu zayo ezinkulu ze-ayisikhilimu, kanye nokudla kwasolwandle okusha, okungabizi kakhulu.
IMiaokou Yeshi itholakala eNew Taipei City, ngqo iJilong (Keelung). Kuseduze ne-Keelung Harbour, futhi yaziwa ngeminikelo yayo yokudla ehlukahlukene kakhulu, kufaka phakathi i-ice enongiwe, inhlama ethosiwe, kanye nokudla kwasolwandle okusha.
ILehua Yeshi itholakala emgqeni ophuzi we-MRT. Kuyinsimu yaseTaiwan kakhulu. Bambalwa abanikazi bezitolo abakhuluma isiNgisi, futhi ukudla kuphakathi nendawo.
Okunye ukudla okulula okwaziwayo emakethe yasebusuku yile:
I-Tianbula ngokwezwi nezwi ethi "Okumnandi, hhayi okubabayo", inguqulo yaseTaiwan yaseTempura.
Ama-pan okuthosiwe engulube
I-Pearl yobisi itiye isiphuzo zakudala esungulwe ngumthengisi wetiyi eTaichung.
I-soy Bean beans kanye neqanda letiye
Isihlungi senkukhu esosiwe)
Govuza i-cuttlefish ethosiwe
Ukudla okwenziwe ngoSoy
I-pizza kulula ukuyithola eTaiwan ngamaketanga amakhulu njengePizza Hut neDomino. Ngaphandle kwezinhlobonhlobo ezejwayelekile, iTaiwan nayo inezinhlobonhlobo zasendaweni isib. Ukudla kwasolwandle okuphezulu, isikebhe sepepile, ummbila, uphizi njll.
Ukudla ngemifino nakho kuyimali ejwayelekile, nedolobha liziqhayisa ngamaresitorendi angaphezu kwamakhulu amabili zemifino nezindawo ezithengisa abathengisi. Enye into ekhethekile yeTaipei ngama-buffets wemifino. Zijwayelekile kuyo yonke indawo, futhi ngokungafani nama-buffets 'we-can-can-can', izindleko zilinganiswa ngesisindo sokudla kweplate yakho. Ilayisi (imvamisa kukhona ukukhetha oku-brown noma okumhlophe) kukhokhiswa ngokwehlukana, kepha isobho likhululekile futhi ungagcwalisa kaningi ngendlela othanda ngayo. Qaphela ukuthi iningi lalezi zindawo zokudlela ze-veggie zingamaBuddha ngokwemvelo ngakho-ke ukudla akunayo i -galikhi noma u-anyanisi (abosomthetho abathi inkanuko idala inkanuko).
Ukuhamba Ukudla Okudla
Ama-Travel Tours ayindlela enhle yokuthola izinhlobo zokudla zasendaweni. Imvamisa ziholwa imihlahlandlela yezilimi ezahlukahlukene ejwayele amasiko endawo. Izivakashi zakwamanye amazwe zizovakashela ama-eateries ayiqiniso endawo okungenzeka kube nzima ukuwathola nokuhamba kuwo.
Ukudla kweTaipei, Kunconyelwe lezo zivakashi ezifuna ukusuka ezindleleni ezijwayelekile zokuvakasha futhi zihlolisise okunye kokudla okuthandwa yindawo.
Itiye elikhethekile laseTaiwan yi-High Mountain Oolong iphunga elimnandi, itiye elikhanyayo neTieguanyin uhlobo olumnyama, olucebile.
Akukho lutho olungcono ngosuku olushisayo futhi olunomswakama weTaipei kunokuphuza ingilazi yejusi eyenziwe kusuka kusiqu esikhulu esikhulu sezithelo ezintsha!
Ngenkathi ngokwesiko isizwe sabaphuza itiye, eminyakeni yamuva abaseTaiwan bamukele ngempela isiko le-cafe futhi wonke amaketanga ajwayelekile angatholakala lapha ngobuningi. Kumakhofi amakhulu anabadlali abaningi, uzulazula emigwaqweni engemuva eduze kweNational Taiwan University phakathi kweXinsheng South Road neRoosevelt Road. Amanye amakhofi amaningi asendaweni ezungeze Renai Road, Isigaba 4 kanye neDunhua South Road. Kukhona futhi nezindawo ezithokozisayo nezinobungcweti phakathi kweYongkang Park neChaozhou Street, nasezindaweni ezizungeze iShida Road. Kodwa-ke, ukuthola uhla lwezitayela ezihlaba umxhwele ikakhulukazi vakashela iBitan eXindian, lapho wonke amakhofi enikeza ukubukwa okuphelele phezu komfula nezintaba ezingaphesheya (yize kungaba nomsindo ngempelasonto).
Izindawo zokudlela ezinhle ze-inthanethi ziningi, ikakhulukazi odongeni olubi phakathi kweTaipei Main Station ne-Peace Park. Kodwa-ke, kungadingeka ukuthi uzulazule (futhi ubheke phezulu naphansi njengoba abaningi bekwizitezi eziphakeme noma ngaphansi) ngaphambi kokuthola eyodwa. Amanye amakhompyutha asebenza ngemali. Amakhekhe e-Intanethi abizwa ngokuthi ama-wang-ka ngesi-Chinese (inhlanganisela ye-wang, igama lesi-China elisho 'inetha', kanye ne-sifushane se-'cafe'.)
Idolobha laseTaipei linikeza insiza ye-Wi-Fi yamahhala ezindaweni eziningi zomphakathi namanye amabhasi wedolobha abizwa nge-TPE-Free. Ukubhalisa kuyadingeka. Uma unefoni ephathekayo evela emazweni akhethiwe ingenziwa ku-inthanethi; noma kungenjalo, ulethe ipasipoti yakho esikhungweni semininingwane esivakashayo, futhi nabasebenzi abanomusa bazokwenzela wena. Le akhawunti ingahle isetshenziselwe izwe lonke lamahhala le-W-iFi elibizwa iTaiwan.
Kukhona nensiza yeWi-Fi ebanzi yedolobha elibizwa ngokuthi iWifly. Ngemali encane, ungathenga ikhadi elikunikeza ukufinyelela kwe-intanethi okungenamkhawulo cishe noma kuphi edolobheni usuku noma inyanga.
IKeelung, idolobha eliyitheku elisenyakatho neTaipei, ligcwele ukudla okumnandi nezindawo zomlando. Ngeminye imininingwane, sicela uvakashele i-Keelung Tourism Service Website Website.
I-Tamsui, idolobha eliyitheku elidala elisenyakatho nentshonalanga yeTaipei, iyisigcawu esikhulu sefilimu yaseTaiwan - Imfihlo kaJay Chou. Kuthandwa kakhulu ngabavakashi.
IJiufen idolobha langaphambili elinezimbiwa zegolide elisogwini olusenyakatho-mpumalanga manje indawo yokuvakasha evumile.
IFulong isogwini olusempumalanga yeTaipei County. Lapho uzothola idolobha elisogwini elinolwandle oluhle kakhulu. Njalo ngoJulayi, ungakhohlwa ukuya emcimbini wezinsuku ezintathu weHo-hai-yan Rock.
I-Yingge idume ngobuningi bayo obuphezulu babumbi nabenzi be-ceramic.
ITaroko Gorge - Lapha, uMfula iLiwu unqamula emimangweni yemabula eyi-3,000-foot. Indawo ezungeze gorge nayo ibizwa ngeTaroko Gorge National Park.
IHsinchu idolobha elinamagugu amadala nepaki yesayensi yesimanje.
IShei-pa National Park idabula izintaba nemifula futhi isendaweni yaseHsinchu County inezindlela ezinkulu zokuhamba ngezinyawo.
ILanga inyanga iLake eNantou County liyichibi elicwebezelayo elicwengeke langena phakathi kwezintaba ezivundile.